Nezve Isu - Goodao Technology Co., Ltd.
Rori Mhepo Compressor
Tire inflator yemudhudhudhu wemagetsi
Tochi & Mwenje
Matayi Repair Pack
Matayi Repair Kits
Yuyao Jiaqiao Auto Accessories Co., Ltd. ikambani inyanzvi mukugadzira marudzi e12VDC emotor air compressor (mota tire inflator), car vacuum cleaner, maturusi emumugwagwa echimbichimbi nezvimwe zvinhu, nezvimwewo. Inowanikwa kumabvazuva kwedunhu reZhejiang - Yuyao. guta rinova 1 awa kutyaira kubva kuNingbo Lishe airport (Ningbo Port), uye maawa maviri kutyaira kubva kuHangzhou kana Shanghai. Kambani inovhara nharaunda ye1500 square metres uye nevashandi makumi masere, zvigadzirwa zvinotumirwa pasirese pasirese nezvitupa zvepasi rese zvekupinda seEC, RoHS, nezvimwe.
Seimwe yefekitari inotungamira uye inyanzvi, zvichibva pamhando ye "quality oriented, mutengi kutanga", takagadzira chaiyo uye inoshanda kwazvo yemhando yekudzora hurongwa. ISO 9001:2000 quality management system zvitupa zvinowanikwa muna 2006.
Kuti tisimudzire zvakanakira mumakwikwi epasi rose emitengo uye kudzora mhando zvirinani, takagadzira yedu harware workshop, mota workshop, jekiseni workshop, kuunganidza musangano, uye molding workshop. Zvizhinji zvezvikamu zvikuru zvezvigadzirwa zvedu zvinogadzirwa mufekitari yedu, zvigadzirwa zvose zvakapedzwa zviri kuuya kubva kumitsetse yedu yekuunganidza.Nezvishandiso zvekugadzira zvehunyanzvi uye timu yakanakisa yeR & D, kugona kwedu kugadzira kunosvika 50,000 pcs air compressor kana vacuum cleaners mwedzi wega wega. Isu takagadzirawo yedu yemhando yekudzora nzvimbo, zvikwata zvekuvandudza zvigadzirwa.
Zvichakadaro, kusimudzira mabhenefiti ehupfumi hwepasirese hwemasevhisi akanaka, pahwaro hwekupasa ISO9001 manejimendi system certification, kambani yakagamuchira ERP, OA uye E-bhizinesi manejimendi system. Tichaenderera mberi nekuunza tekinoroji yepamberi neyekunze uye ruzivo rwemanejimendi, uye tichiedza kuvandudza kunaka kwechigadzirwa uye kukwikwidza. Zvizhinji zvezvigadzirwa zvedu zvine zvitupa zvepasi rese izvozvi.
ADDRESSNhamba 1279 Tanjialing West Road, Lanjiang Street, Yuyao, Zhejiang, China